Ndechipi Chipo Chikuru Kupfuura Zvese?
SARUDZA MUTAURO Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Batak (Karo) Batak (Toba) Biak Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Digor Drehu Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabiye Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mongolian Myanmar Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngangela Nias Niuean Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Ponapean Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Runyankore Russian Samoan Sango Saramaccan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tojolabal Tok Pisin Tongan Tsonga Turkish Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urhobo Uruund Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Xhosa Yoruba Zande Zulu
Chipo chaMwari cherudzikinuro ndicho chikuru kupfuura zvese, nekuti chinoita kuti tikwanise kuzorarama nekusingaperi
NYAYA IRI PAKAVHA | NDECHIPI CHIPO CHIKURU KUPFUURA ZVESE
“Zvipo zvose zvakanaka nezvinopiwa zvose zvakakwana zvinobva kumusoro, nokuti zvinoburuka zvichibva kuna Baba vezviedza zvokudenga.” (Jakobho 1:17) Vhesi iyi inotaura nezverupo rwuna Baba vedu vekudenga, Jehovha Mwari. Asi pazvipo zvakawanda zvaakapa vanhu, pane chikuru kupfuura zvese. Ndechipi ichocho? Mashoko aJesu anozikanwa ari pana Johani 3:16, anoti: “Mwari akada nyika kwazvo zvokuti akapa Mwanakomana wake akaberekwa ari mumwe oga, kuti munhu wose anotenda maari arege kuparadzwa asi ave noupenyu husingaperi.”
Chipo cheMwanakomana wake akaberekwa ari mumwe oga, ndicho chipo chikuru nekuti chinoita kuti tisunungurwe pakuva varanda vechivi, kukwegura uye rufu. (Pisarema 51:5; Johani 8:34) Nyangwe tikaedza zvakadii, hatimbokwanisi kuzvisunungura pauranda uhwu. Asi nerudo rwake rwakadzama, Mwari akatipa chipo chinoita kuti tisunungurwe. Kupa kwaakaita Mwanakomana wake, Jesu Kristu serudzikinuro, kwakaita kuti vanhu vave netariro yekuzorarama nekusingaperi. Asi chii chinombonzi rudzikinuro? Nei rwuchidiwa? Uye tinobatsirwa sei narwo?
Rudzikinuro mubhadharo wekuti uwanezve chinhu chawanga warasikirwa nacho kana kuti wekusunungurirwa mumwe munhu. Bhaibheri rinotaura kuti vabereki vedu vekutanga, Adhamu naEvha, vakasikwa vasina chivi, vaine tariro yekurarama nekusingaperi muparadhiso nevana vavaizobereka. (Genesisi 1:26-28) Zvinosuruvarisa kuti havana kuteerera Mwari, zvichibva zvaita kuti varasikirwe nezvinhu zvese izvozvo uye vave nechivi. Chii chakazoitika? Bhaibheri rinoti: “Chivi zvachakapinda munyika nomunhu mumwe chete uye rufu zvarwakapinda nechivi, saizvozvowo rufu rwakapararira kuvanhu vose nokuti vose vakanga vatadza.” (VaRoma 5:12) Saka Adhamu akabereka vana vane chivi uye ndosaka tichifa.
Panyaya yerudzikinuro, mubhadharo wacho unofanira kuenderana nechinhu chaunenge warasikirwa nacho. Kusateerera kwakaita Adhamu nemaune kwakaita kuti ave nechivi uye zvakaita kuti azofa. Bhaibheri rinoratidza kuti zvaakaita zvakakonzera kuti vana vaakazobereka vave varanda vechivi nerufu. Saka Jesu ndiye aikwanisa kupa upenyu hwake sechibayiro kuti vanhu vakwanise kusunungurwa nekuti akanga asina chivi. (VaRoma 5:19; VaEfeso 1:7) Rudo rwakaratidzwa naMwari nekubhadhara rudzikinuro ndirwo rwakaita kuti vanhu vave netariro yekurarama nekusingaperi muparadhiso panyika.—Zvakazarurwa 21:3-5.
Chipo chaMwari cherudzikinuro ndicho chikuru kupfuura zvese, nekuti chinoita kuti tikwanise kuzorarama nekusingaperi. Kuti tinyatsoona kukosha ‘kwechipo ichi chakakwana,’ ngationei kuti chinoenderana sei nezvinhu zvataurwa munyaya yapfuura zvinoita kuti chipo chifarirwe.
Chinozadzisa zvatinoda. Takasikwa tiine chido chekuramba tichirarama. (Muparidzi 3:11) Kunyange zvazvo tisingakwanisi kuzadzisa chido ichi pachedu, rudzikinuro rwunoita kuti izvi zvikwanisike. Bhaibheri rinoti: “Nokuti mubayiro wechivi ndirwo rufu, asi chipo chinopiwa naMwari achishandisa Kristu Jesu Ishe wedu ndihwo upenyu husingaperi.”—VaRoma 6:23.
Chinotibatsira. Vanhu havakwanisi kupa rudzikinuro. Bhaibheri rinoti: “Mutengo wokudzikinura mweya yavo unokosha kwazvo zvokuti [havatombokwanisi kuubhadhara].” (Pisarema 49:8) Saka taitoda kubatsirwa naMwari kuti tikwanise kusunungurwa pachivi nerufu. Mwari akatibatsira ‘nekutisunungura nerudzikinuro rwakabhadharwa naKristu Jesu.’—VaRoma 3:23, 24.
Chakapiwapanguvayakakodzera.Bhaibheri rinotiudza kuti: “Patakanga tichiri vatadzi, Kristu akatifira.” (VaRoma 5:8) Rudzikinuro rwunoratidza kuti Mwari anotida chaizvo pasinei nechivi chatinacho nekuti akarwupa “patakanga tichiri vatadzi.” Uye rwunoita kuti tive netariro kunyange zvazvo tichiri kutambura nechivi.
Chakapiwa nechikonzero chakanaka. Bhaibheri rinotaura chakaita kuti Mwari ape Mwanakomana wake serudzikinuro: “Neizvi rudo rwaMwari rwakaratidzwa pachena kwatiri, kuti Mwari akatuma Mwanakomana wake munyika, iye akaberekwa ari mumwe oga, kuti tiwane upenyu pachishandiswa iye. Rudo ruri pachinhu ichi, kwete kuti isu takada Mwari, asi kuti iye akatida.”—1 Johani 4:9, 10.
Ungaratidza sei kuti unoonga chipo ichi chikuru? Yeuka kuti pana Johani 3:16, Jesu akaratidza kuti vaya ‘vanotenda’ maari ndivo chete vachapona. Bhaibheri rinotsanangura chinonzi kutenda richiti, “kutarisira nechivimbo zvinhu zvinenge zvichitarisirwa.” (VaHebheru 11:1) Kuti tive nechivimbo ichocho, tinofanira kuva nezivo yakarurama. Saka tinokukurudzira kuti udzidze nezvaJehovha Mwari akatipa ‘chipo ichi chakakwana,’ uye kuziva zvaungaita kuti ukwanise kuzorarama nekusingaperi.
Zvinhu izvi unokwanisa kuzvidzidza pawebsite yedu inonzi www.jw.org. Zvapupu zvaJehovha zvinogona kukubatsira. Tine chokwadi chekuti pauchadzidza nezvechipo ichi chikuru uye pauchaona kubatsira kwachinoita uchataura mashoko ekuti: “Mwari ngaaongwe nokuna Jesu Kristu Ishe wedu!”—VaRoma 7:25.
Text Nzira dzokudhaunirodha nadzo mabhuku NHARIREYOMURINDI Nhamba 6 2017 | Ndechipi Chipo Chikuru Kupfuura Zvese?
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa NHARIREYOMURINDI Nhamba 6 2017 | Ndechipi Chipo Chikuru Kupfuura Zvese?